Uvalelisile kuMaZulu obheke kwiChiefs - nabanye abakhonjwa kwiChiefs - Impempe
Uvalelisile kuMaZulu obheke kwiChiefs – nabanye abakhonjwa kwiChiefs
USibusiso Mabiliso, obeyibamba kuMaZulu FC, uzobe egijima kwiKaizer Chiefs nakanjani ngesizini ezayo. Leli nxele eliyibamba emuva kwesokunxele selivalelisile kuSuthu lapho ebese lihlale khona amasizini amathathu. UMabiliso ungumdlali onekhono kakhulu futhi akasali eqenjini lesizwe lakuleli lika-Under 23.
Ungomunye wabadlali boSuthu abadlale indima enkulu kule sizini esanda kuphela, njengoba leli qembu ligcine liqede endaweni yesibili kwilogi yeDStv Premiership.
“Namuhla ngiyavalelisa kuwo wonke umuntu kuMaZullu FC, ngemuva kweminyaka emithathu nohhafu eqenjini. Ngiyabonga isikhathi sindawonye, sibe nezikhathi ezimnandi futhi bengizizwa ngisekhaya. Kumengameli uZungu (Sandile) nabo bonke abaphethe, ngiyabonga futhi ngiyazithoba ngokunikwa ithuba lokudlalela leli qembu
“Ngiyohlale ngikubonga eningenzele kona futhi leli qembu liyohlale lisenhliziyweni yami,” kusho uMabiliso.
Omunye osondelene noMabiliso ukuthi ukuqinisekisile ukuthi uya kwiChiefs. “Sekuqedwe konke, uya kwiChiefs. Ngikhuluma ngento engiyaziyo ngoba sisondelene kakhulu naye,” kusho lo mthombo.
Kwenzeka lokhu nje kulindeleke ukuthi iChiefs imemezele uStuart Baxter njengomqeqeshi wayo omuhla lingakapheli isonto. UBaxter kuthiwa sekuqedwe konke naye njengoba esayine inkontileka yeminyaka emithathu.
Okunye okuvelayo ngoBaxter ukuthi uyena ohamba phambili emizameni yokunxenxa uBongani “Ben 10” Zungu, oke wadlala kwiMamelodi Sundowns, ukuthi ajoyine iChiefs. Lo mdlali uyibamba kwiRangers FC yaseScotland, abolekiswe kuyona yi-Amiens okuyiqembu laseFrance. Kuthiwa iChiefs izimisele ngokukhokha itshe lemali ukuze ithole uZungu, kanti izomholela kahle.
Omunye umdlali omataniswa neChiefs uKeagan Dolly, osanda kuhlukana neMontpellier yaseFrance. Lo mdlali kuke kwavela ukuthi ufunwa yiSundowns, abedlala kuyona ngaphambi kokuya phesheya, ne-Al Ahly yase-Egypt, eqeqeshwa nguPitso Mosimane. Nokho kuyavela nokuthi iChiefs isibhekile isimo sakhe futhi imfuna eNaturena.
IChiefs izobhekana neWydad Casablanca yeseMorocco emdlalweni owandulela owamanqamu weChampions League ngoJuni 19 ekuhambeni. Umlenze wesibili ukulela ngoJuni 26. Akwaziwa noma uBaxter uyena yini ozebe esephethe izintambo kulo mdlalo.
Previous Previous post: Usefikile kuleli uBaxter okulindeleke athathe umsebenzi wokupheka iChiefs
Next Next post: Usebheke ukuyodlala phesheya uZoleka okhulele kunobhutshuzwayo